यीनै हुन महराको क*र्तुत सार्वजनिक गर्ने सा*हसि पत्रकार ! – Life Nepali
यीनै हुन महराको क*र्तुत सार्वजनिक गर्ने सा*हसि पत्रकार !
काठमाडौँ। मुलुकका मुलाधारका पत्र पत्रिकाको समेत नजर नपरेको एक महत्वपूर्ण र ठुलो बिषयको प*र्दाफास गर्दै एक अनलाइन पत्रकारले शाहासिक काम गरेका छन्। नेपाल प्रेस युनियनका महासचिब समेत रहेका हाम्रा कुरा अनलाइन प्रधान सम्पादक अजयबाबु सिवाकोटीले यस्तो शाहासिक काम गरेका हुन्। संघिय संसद प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्ण बहादुर महाराले एक महिलालाई यौ*न दुरा*चार गरेको आ*रोप सहितको समाचार हाम्रा कुरा अनलाइन मार्फत ब्रेक गरेका थिए।
सोही समाचारले महराको सभामुखको पद समेत गएको छ। उनि माथी आइतबार बेलुका एक महिलाको कोठामै गएर महिलामाथि यौ*न दुरा*चार गरेको आ*रोप छ। मा*दक प*दार्थ से*वन गरेर मा*तेको अबस्थामा पुगेका सभामुख महराले आफ्नो साथमा मा*दक प*दार्थ समेत लिएर गएको पत्रकार सिवाकोटीले तथ्य सहितको समाचार ब्रेक गरेका थिए। प्रेस युनियनका महासचिव समेत रहेका पत्रकार सिवाकोटीले पि*डित महिलालाई भेटेर नै भिडियो सहितको समाचार ब्रेक गरेका थिए। जसले पी*डक महराको पद समेत खुस्काइ दिएको छ।
बला*त्कारको आ*रोप लगाएकी महिलाले प्रहरीलाई दिइनन् उ*जुरी,
आफुमाथी ब*ला*त्कार भएको भन्दै मिडियामा आएकी रोशनी शाहीको बिषयमा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ । महिलाले प्रहरी उ*जुरी नदिएपनि महरा आफैंले आफुमाथी लागेको आ*रोपको अनुसन्धान थाल्न आग्रह गरेपछि प्रहरीले आन्तरिक छानबिन थालेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । आ*रोपित सभामुख महराले समेत प्रहरी नेतृत्वलाई आफैंले फोन गरेर यसको अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको समेत उनले सुनाएका छन् । अनुसन्धान टोलीले अहिले पीडित भनिएकी महिला र सभामुख महराको फोन ट्रयाक गर्ने काम भईरहेको छ । प्रहरीका एक अधिकारीले भने, ”आ*रोप गम्भीर विषय भएकाले आन्तरिक रुपमा यसको अनुसन्धान शुरु गरेका हौं ।”
उनले सामन्यतय पीडितले दिएको उजुरीका आधारमा अनुुसन्धान गर्ने कानुनी व्यवस्था हुदाँहुदैं महिला प्रहरीको सम्पर्कमा नआएपनि उनको भिडियोसहित मिडियामा समाचार आईसकेकाले हामीले आन्तरिक रुपमा यसको अनुसन्धान शुरु गरेका हौं भने ।संघीय संसदको सचिवालयमा काम गर्ने एक महिलाले सभामुख महराले आफुलाई आफ्नै कोठामा ब*ला*त्कार गरेको आ*रोप लगाएकी छन् । तर महराले भने आफुमाथी लगाइएको आ*रोप तथ्यहिन तर गम्भिर भएको बताएका छन् । नीज महिलासँग आफ्नो पारिवारिक सम्बन्ध भएकाले नियमित आउने जाने हुने गरेको र सोही रात पनि उनकोमा पुगेर सँगै र*क्सी खा*एको स्विकार गरेका छन । तर अरु कुनै काम नगरेको उनको जिकिर छ ।
Previous कती बर्ष पुगिन अञ्जली ? आज अञ्जली अधिकारीको जन्मदिन: (अञ्जलीका हिट तस्बिर)
Next सलुट छ उपप्रमुख बसन्तीलाई, जसले ३० लाखको गाडी सुविधा नलिई गाउँमा बि*रामी एम्बुलेन्स खरिद